We.com.mm - အကိတ်ခေတ်မှာ ကိတ်တာထက်မိုက်ပြီး Fit ဖြစ်နေတဲ့ နန်းလောဝ်ခမ်း (သို့) Made In Myanmar
အကိတ်ခေတ်မှာ ကိတ်တာထက်မိုက်ပြီး Fit ဖြစ်နေတဲ့ နန်းလောဝ်ခမ်း (သို့) Made In Myanmar
Instagram က ဘော်ဒီလှလှ ဘိုမလေးတွေ…၊ ခါးသေးသေး ရင်ချီချီ တင်ကားကားနဲ့ပုံတွေ…၊
ဂျင်မှာ sport bra လေးဝတ် yogan pant လေးဝတ်ပြီး ကစားနေတဲ့ပုံတွေ ၊
Motivation အပြည့်နဲ့ အလေးတွေမ အပြင်းအထန်ကြိုးစားတဲ့ပုံတွေ တွေ့ပြီး …အားကျပြီး..မိုက်လှချည်လားဆိုပြီး တွေးနေကြတယ်မဟုတ်လား။
မှန်မှန်ပြောနော် စိတ်ထဲမှာ ဘိုမတွေမို့လို့ ဒီလောက် မိုက်တာပါလို့ရော မတွေးမိကြဘူးလား?
အဲ့ဒီလိုမိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိပါတယ်ဆိုရင်ရော…..????
ဟုတ်ပါတယ် ပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ပါတော့။ Made In Myanmar စစ်စစ်ပါ။
တခြားနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ sexy အဖြစ်ဆုံး nurse တို့…၊အလှဆုံး ဘော်ဒီဆိုတာတွေကြည့်ပြီးပဲ နေနေခဲ့ရတာ......
အခုဆို.....ဒါ ဒို့မြန်မာပြည်က အလှဆုံးဆိုပြီး ပြန်ပြလိုက်ကြစို့နော်။
သဘာဝအရ မိန်းမတွေမှာ ရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေဟာ ကြွက်သားတွေကြီးထွားလာဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဆေးပညာသဘောတွေဖယ် သာမာန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင် လူတွေမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားကြီးစေတဲ့ဟော်မုန်း testosterone က - မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် ၁၀ ဆ ၁၅ ဆ နည်းပါတယ်။ သဘောကတော့ မိန်းမတစ်ယောက် မာဆယ်ရှိချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင် ယောက်ျားက ၁လ လောက်ကစားရင် ရတဲ့အရာကို မိန်းမတစ်ယောက်က ၇ လ ၈ လနီးပါးလောက် ကစားမှရပါမယ်။
နောက်ပြီး မှားယွင်းနေတဲ့အယူအဆတစ်ခုက ….မိန်းမက ဗလနဲ့ ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်ပါ။
ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါအုံးလေ…..။ ဗလနဲ့ မိန်းမဆိုတာ တော်တော်များများ ထင်နေကြသလို အဖုဖုတွေနဲ့ ယောက်ျားလိုကြီး ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အရင်ဆုံးမြင်ရမှာတော့ နှာတံပေါ်ပေါ်နဲ့ ချစ်စရာမိန်းမငယ်လေးပါ.....cute ဖြစ်တဲ့ မိန်းမငယ်လေးအသွင်နဲ့ နန်းလောင်ခမ်းပါ။ ကဲ နောက်တစ်ပုံဆက်ကြည့်ရအောင်နော်......။
Gym သွားဖူးတဲ့သူတိုင်း၊ အလေး Weight Training ကစားဖူးတဲ့သူတိုင်းက မာဆယ်တစ်ခုထွက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ အသိဆုံးနေမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး Toning ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိ ပေးဆပ်ရင်းနှီးခဲ့ရသလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ကြမှာပါ။
မြန်မာအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ အထစ်ထစ် အမြှောင်းမြှောင်းတွေများ ပေါ်နေသလားလို့ ?
ကဲ ကြည့်ကြပါအုံး မြင်ရလား အဖုအဖုမာဆယ်တွေကို....
ဒီလို မိန်းမဆန်ဆန်မျက်နှာလေးနဲ့ ဘယ်လောက်စိတ်ထားပြင်းပြင်းထန်ထန် ကစားခဲ့ပါလိမ့်
6 pac လေးရဖို့ဆိုတာ…အင်း အင်း လွယ်တော့မလွယ်လှပေဘူး။
မိန်းကလေးပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပါ မပျက်မကွက်ကစားထားတဲ့ သက်သေတွေပါ။
ပေါင်က မာဆယ်တွေကို မြင်နိုင်မှာပါ....။
ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကစားတာက အခက်ခဲဆုံးပါပဲ။ မယုံရင် squat လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ကြည့်ပါ။ တစ်ချို့တွေ ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းတွေကသာ လှနေပေမယ့် အောက်ပိုင်းမကစားနိုင်လို့ မကစားကြဘဲနေလို့ အပေါ်အောက် မမျှတဲ့ကိုယ်လုံးဘော်ဒီတွေလည်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။
တကယ်က ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန် စင်ပေါ်မှာ လူမြင်သာအောင် ညှစ်ထုတ်ပြရလို့သာ မာဆယ်တွေကကြီးနေတာပါ။
ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတိုင်း မာဆယ်ကိုပြိုင်ရတာဖြစ်လို့၊ မာဆယ် မပေါ်မှာစိုးလို့ မပေါ်ပေါ်အောင်ပါ ညိုနေအောင် သုတ်လိမ်းထားရတာမျိုးတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
သာမာန်အချိန်မညှစ်ထားရင် မာဆယ်တွေ ပေါ်မနေပါဘူး။
မာဆယ်ဆိုတာမျိုးက ထွက်ချင်တိုင်းတောင် ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဆုတောင်းလေ ဆုတောင်းလို့ဆိုရမလိုပါပဲ။
မာဆယ်ဆိုတာနဲ့ အာနိုးကို ပြေးမြင်ရင်တော့မှားသွားမှာပေါ့လေ။
မိန်းမတစ်ယောက်မှာလည်း ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့နေရာမှာ မာဆယ်တွေရှိမှသာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ လှနေမှာပါ။ ဒါကို toning ဖြစ်တယ် Fit ဖြစ်တယ် လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ တင်မရှိတဲ့ မိန်းမဆို လှတယ်လို့များ မြင်မိကြလား ပရိသတ်ကိုကိုတို့ရေ….။
တင်ရှိတယ်ဆိုတာတကယ်က တင်နေရာမှာရှိတဲ့ မာဆယ်တောင့်တင်းမှသာ ဝန်းဝန်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လှတဲ့ တင်လေးဖြစ်နေမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုဘဲ လက်မောင်းနေရာမှာလည်း ပိန်တယ်ဆိုတိုင်း အရိုးဂေါက်ဂက်ဆိုရင် ဘယ်သူကလှတယ်ပြောမလဲ။ လက်မောင်းနေရာမှာလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးရှိမှလည်း လှနေမှာမျိုးပါ။
ဒီလောက်ရက်ရက်စက်စက် မိုက်နေတာ ဘာ ဆီလီကွန်မှ မပါ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ….ချွေးနဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာပါ။
ချွေးတွေအပြင်...ဒီလိုပြိုင်ပွဲဝင်ပြီး စင်ပေါ်တက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြရတာတွေကို သဘောမကျပါဘူးဆိုတဲ့ ဖခင်နဲ့ပါ အတိုက်အခံလုပ်ခဲ့ရတယ်။
ဒီအလုပ်ဆက်လုပ်ရင် အိမ်ပေါ်ကဆင်းဆိုလို့ မိမိယုံကြည်ရာအတွက် အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး အမေနဲ့အတူ စက်ချုပ်ဆိုင်မှာနေရင်း နေ့ခင်းစက်ချုပ်ကူ တစ်ဖက်ကနေ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကာယလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ထားရတဲ့ ကာယအလှမယ်ပါ။
လောကမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘယ်အရာကမှ လွယ်လွယ်နဲ့ ရရိုးထုံးစံမရှိပေဘူး။
ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လှတယ်ဆိုတာလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ရတာ မဟုတ်ပေဘူး။
အချိန်တွေ…ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ…..စိတ်မာကျောမှုတွေ .....ဇွဲတွေ...ရှိမှသာ ရနိုင်သာမျိုး။
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးပါတဲ့ …စာရေးသူကတော့ ဆီလီကွန်နဲ့လှတာလည်း လှတယ်လို့လက်ခံပါတယ်လေ..။
သို့သော်လည်း မိမိအပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ယူထားတဲ့ ဒီလို fit ဖြစ်တဲ့အလှမျိုးကိုတော့ လှတယ်လို့ယူဆတဲ့အပြင် ပိုပြီး လေးစားတယ်…..ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားယူခဲ့ရလို့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ ယူဆတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ ဆီလီကွန်ဆိုတာမျိုးက ဒီနေ့ထည့် နက်ဖြန်ချက်ချင်း ဖုထစ် ဖောင်းထွက် လာတာမျိုးကိုး။ အဲ့လိုပြောလို့ တချို့တချို့ ဆီလီကွန် မမတွေ ကျိန်ဆဲမယ်ဆိုလည်း ခံယူဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလေ။
လူဆိုတာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက တူတာမျိုးမှ မဟုတ်ဘဲ။
ဒီလောက်လှတဲ့ သူမ အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုယူဆောင်လာပေးခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်ရွှေမြန်မာတို့ထဲမယ် မသိကြသေးတဲ့သူတွေများလို့ We ကနေပြီး ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဝါသနာအလျှောက် လုပ်ရာကနေ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အမျိုးသားအားကစားပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။
၂၀၁၅ မှာ ပြည်ထောင်စုမယ်ပြိုင်တယ်....အိုလံပစ်မယ်ပြိုင်တယ်။ ဝင်ပြိုင်တိုင်းလည်း အမြဲ ပထမဆုရတယ်။ လက်ရွေးစင်အဖြစ်ပြိုင်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့အဆင့်ဆင့်တက်လာလိုက်တာ အာရှမှာလည်း ပထမဆုံးရွှေတံဆိပ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီနှစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
နန်းလောဝ်ခမ်းက ဒီလ သြဂုတ်လမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် 51st ကြိမ်မြောက် Asian Bodybuiliding and Physique Sports Championships မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ကဲ We ချစ်သူတို့ရေ...အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့် August လ ၂၀ (တနင်္ဂနွေ) မှ ၂၆ ရက်နေ့ (စနေနေ့) အထိ ပြိုင်ပွဲတွေကို နားစွင့်ပြီး ဝန်းရံလိုက်ကြရအောင်နော်။
သွားလေးတွေဖြူဖွေးပြီး လှပတဲ့အပြုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) နည်း…
အမျိုးသမီးတွေ အထိုးများတဲ့ တက်တူးအသေးစားများ
ဆံသားကို ဖြောင့်စင်းလှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၇) သွယ်
Too Faced ရဲ့ Super Cute New Makeup Bags
အဆင့်အတန်းမရှိသူများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသော လက္ခဏာ ( ၁၈ ) ချက်
မြန်မာ့တပ်မတော် page နဲ့ BTS Army Fan Page ကိုမှားပြီး hack မိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟက်ကာများ
မက်ဂီမာရလင်းရဲ့မော်ဒယ်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ် Beauty သက်သက်သင်း
ချစ်တင်းနှောနေစဉ် စအိုထဲ Air Fresher ဝင်သွားလို့ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား
အာဇာနည်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ ၅၀၀ တန်အသစ်ထွက်မည်